★မြန်မာ့အလင်း★: ကုလား အဖိုးအဖွားတို့၏ ကျောင်းတော်တူးဖေါ်တွေ့ရှိ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ နှင့် ၁၇၀၀ မှ ကျောင်းတော်နှစ်ခုကို တူးဖေါ်တွေ့ရှိထားပါတယ်။ ကုလားတွေရဲ့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ စကားနိုင်အောင် လုပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု ကုလား မွတ်ဆလင်တွေဟာ သူတို့အဖိုးကိုသတ်ပြီး အဖွားကို မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ လူရမ်းကား အာရပ်တွေကို အထင်ကြီးနေကြပါတယ်။ သူတို့ အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လုံးဝ မေ့ပြစ်လိုက်ပါပြီ။အံသြဖို့ကောင်းတာက အာရပ်တွေကို စိတ်မနာတဲ့အပြင် သူတို့အလိုကျ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆောက်အဦးတွေကို ဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ ကုလားတွေကို မေးချင်ပါတယ်။ လူဆိုတာ ဖိုးဖွားမိဘ အမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦးတွေကို မြင်တိုင်းဂုဏ်ယူရပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့တွေ အခုကျောင်းတော်ကြီး တူးဖေါ်တွေ့ရှိမှုကို ဂုဏ်ယူနိုင်ပါ့မလား? ဒါမှ မဟုတ်ရင် အဲဒီကျောင်းတော်ကြီးကို အာရပ်တွေအလိုကျ ဖျက်စီးချင်သလား? ဖြေကြည့်ပါခင်ဗျာ
A Buddhist temple dating from around 1,700 years ago has been discovered inarecent archaeological excavation inanorthern district of Bangladesh, reportsaBangladesh newspaper.
The Buddhist temple was discovered in Shibganj Township in Bogra District when the archaeological department started excavations there.
The regional director of the archaeological department said the entire temple may be uncovered if the excavation work that started in early December, 2006, runs according to plan.
The newly excavated temple is over 1,700 years old and the lower part of the temple was decorated with arched panels of terra-cotta and ornamental bricks, said an official from the archaeological department.
A brick structure comprised of some small rooms has also been discovered in the temple.
Previously, an approximately 1,500-year-old pre-Pal period Buddhist temple was excavated on the same premises.#
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 6:56 AM